नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर विमान काबुल जाँदै, तर कहिले ? — Sanchar Kendra
नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर विमान काबुल जाँदै, तर कहिले ?
निगमका एक निर्देशकका अनुसार त्यहाँका विभिन्न कम्पनीका काम सकिएर घर फर्किन खोजिरहेका करिब ७० नेपालीलाई अफगानिस्तानबाट काठमाडौं ल्याउन र लकडाउनअघि बिदामा नेपाल आएर नियमित उडान नभएका कारण जागिरमा फर्किन नसकिरहेका ७० जना जतिलाई काठमाडौंबाट काबुल पुर्‍याउन निगमको विमान त्यहाँ जान लागेको हो । यो चार्टर उडान हो । निगमले यो चार्टर उडानबारे आन्तरिक तयारी लगभग सकिसकेको जनाएको छ । यो चार्टर गर्ने एजेन्ट एयर चार्टर सर्भिस प्रालि हो ।
‘यो चार्टर उडान दुबईमा रहेको एउटा कम्पनीले गर्न लागेको हो,’ निगमका निर्देशकले भने, ‘आज (उसले) निगमलाई चार्टरबापतको भाडा पनि पठाएको छ ।’ उनका अनुसार उक्त कम्पनीले नेपालबाट जाने र नेपाल फर्किने कम्तीमा ७०/७० जना नेपाली हुने भनेको छ । यो चार्टर उडान भएकाले निगमले टिकट बिक्री गरेका छैन । ‘प्रति घन्टा ७ हजार ७ सय १० अमेरिकी डलरका दरले चार्टर उडान हुने छ,’ उनले भने ।
द्वन्द्वसँग जोडिएको मुलुकमा हुन लागेको चार्टर उडानमा निगमले सामान्य अवस्थामा गरेको बिमाले मात्रै नहुने भएकाले जहाज र त्यसमा ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुको अतिरिक्त बिमा पनि गर्नुपर्छ । निगमको जहाज अफगानस्थान जान लागेको यो दोस्रो पटक हो । ५ वर्षअघि काबुलमा भएको आत्मघाती बम बिस्फोटमा १२ नेपाली सुरक्षा गार्डको निधन भएको थियो । उक्त घटनामा मारिएका १२ नेपालीको शव लिन निगमको न्यारोबडी ०७३ असारमा अफगानस्थान गएको थियो ।